အဘယ်ကြောင့် Us - Mandarin နံနက်တရုတ်ကျောင်း
တရုတ်များ၏ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းများနှင့်ရှေးဟောင်းဘာသာစကား: အဘိဓါန် Mandarin- ။ သငျသညျတစ်ပြိုင်နက်, နားထောင်ခြင်းနေသောစကားများသင်တို့မျက်မှောက်၌ပေါ်လာသောအတို animations တွေကိုတစ်စီးရီးဖြစ်ပေါ်လျှင်အဖြစ်တရုတ်စကားပြောဆိုမှုနားထောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ၎င်း၏ဟန်ဇီ (တရုတ် Script), အားလုံးဓါတ်ပုံတွေကနေဆင်းသက်လာသောဇာတ်ကောင်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပုံပြင်များကိုပြောပြ! တစ်ချိန်တည်းမှာကြီးမားပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘို့ခွင့်ပြုနေစဉ်အတွင်းသူများသည်တရုတ်စာလုံးများကိုသငျသညျတိကျစွာနှင့်အားကောင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖော်ပြနိုင်စွမ်းပေးခြင်း, ဘာသာစကားတညျဆောကျပုံ။ က aural ကျွမ်းကျင်မှုဒါပုံမှန်တရုတ်လမ်းအတွက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုတတ်ဖို့သင်ယူဘို့မဖြစ်မနေဖြစ်ကြသကဲ့သို့အဘယ်သူမျှမအံ့သြစရာငါတို့သည်လုံလောက်သောနားထောင်ကျွမ်းကျင်မှု၏အရေးပါမှုကိုအလေးပေး။
ကျွန်ုပ်တို့၏ In-အိမ်သူအိမ်သားဒီဇိုင်း 1-2-3 သင်ယူ Cycle အပြည့်အဝကတရုတ်ဘာသာစကား၏ဤအများနှင့်အခြားအခြေခံအသိအမှတ်ပြုထားသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့တစ်ချိန်တည်းမှာကျနော်တို့ရုံကစတင်သုံးစွဲပါက၏အဓိကကြည့်ရှုခြင်းနှင့်နားလည်စေရန်ဘာသာစကားကိုပြိုကွဲ။ သငျသညျလကျ၌သွားလာရင်းလက်ကို အသုံးပြု. နှင့်နားလည်ဘယ်မှာသင့်ရဲ့မိခင်ဘာသာစကား, သင်ယူတူသောထိုသည်မဟုတ်လော
"ဆရာ, အဘယ်သို့သောအ ဌ ogic အဘိဓါန် Mandarin- ၏ ? သူအပေါငျးတို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို သငျသညျအကြှနျုပျကိုပေး, သူတို့သည်ငါ၏ဦးခေါင်းလှည့်ဖျားပါစေ! သင်သာနိုင်ပါလျှင် အကျွန်ုပ်ကိုရန်၎င်း၏ယုတ္တိဗေဒရှင်းပြသင်သိမီ, ငါကျွမ်းကျင်စွာပါလိမ့်မယ်! "
ဟုတ်ပါတယ်, အဲဒါရိုးရှင်းစွာအနောက်တိုင်းဘာသာစကားများနှင့်အဘိဓါန် Mandarin- အကြားအနောက်တိုင်း (Non-တရုတ်) စဉ်းစားတွေးခေါ်နှင့်တရုတ်အတှေးအချေါ, အကြားကွာဟချက်ကိုပေါင်းကူးနိုင်ဘူး, သင်ကြားမှုနည်းစနစ်များသုံးသလိုပဲ။ အဲဒီအစားသဘောပေါက်နားလည်နိုင်စွမ်းကိုပူဇော်သက္ကာဘို့၏, စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့် ပို. ပင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုခံခဲ့ရသည်။
ကျောင်းသားများကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းအဘိဓါန် Mandarin- ဘဝလွယ်ကူအောင်ကိုခေါ်သစ်တစ်ခုနည်းစနစ်နှင့်အတူတက် လာ. အနှေးလှုပ်ရှားမှုနည်းစနစ် ။ အနှေးကို Motion technique ကို အမှန်ပင်သင်သည် Mandarin အဘိဓါန်၏ယုတ္တိဗေဒပြသထားတယ်နှင့်ထို့ထက် ပို. အရေးကြီးသည်မှာ, သင်ရုံနှင့်အတူအဘိဓါန် Mandarin- သွန်သင် ONE အုပ်ချုပ်မှုကို အစားများစွာနှင့်ပြီးသောကျောင်းသားကြောင်းကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည်မဟုတ်လော
သင်အစောပိုင်းက, ကောင်းစွာသိသည်စေလိုကြောင်းအမှုအရာရှိပါတယ် အနှေးလှုပ်ရှားမှုနည်းစနစ် သူတို့ကိုငါ့အဘို့တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုငါအချိန်တွင်ပြုသကဲ့သို့ကြောင့်အထောကျအကူရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်ဘူး!
ဒါဟာလှပသောတရုတ်တတ်နိုင်သမျှအမြင့်ဆုံးသင်ကြားရေးအရည်အသွေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းသားတွေပို့ခြင်းဖြင့်ဘာသာစကား, ဘာပဲသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်, နောက်ခံသို့မဟုတ်အသက်အရွယ်နှင့်နေရာတိုင်းမှာသူတို့ပြန့်နှံ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မစ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလိုလုပ်ဖို့နိုင်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့အကောင်းဆုံးဆရာများဝင်ရောက်ခဲ့သည်နှင့်အမျှော်လင့်ထားထက်ကျော်လွန်သောရလဒ်များကိုအလျှော့ပေးလိုက်လျော, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့သင်ကြားမှု concept ကိုတီထွင်ခဲ့ကြသည်။
အဘိဓါန် Mandarin- နံနက်ချဉ်းကပ်
12နဲ့2PLUS 1 သင်ရိုးညွှန်းတမ်း
တစ်ချိန်တည်းမှာတရုတ်စာမေးပွဲရန်သင့်ပြင်ဆင်နေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့၏သင်ရိုးညွှန်းတမ်း, သင်သည်သင်၏အဘိဓါန် Mandarin- သင်ယူမှုရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်စေသည်
စာမေးပွဲအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ် extra သင်တန်းများ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနှေးလှုပ်ရှားမှုနည်းစနစ်ကို အသုံးပြု. လိမ္မာပါးနပ်သင်ယူ,
ကျွန်ုပ်တို့၏အနှေးလှုပ်ရှားမှုနည်းစနစ်အလွန်တရာသင့်ရဲ့သင်ယူမှုမြန်နှုန်းတိုးမြှင်ပေးသောအဘိဓါန် Mandarin- ၏စစ်မှန်တဲ့ core ကို, ထုတ်ဖော်ပြသ
အဘိဓါန် Mandarin- ၏အဓိကထင်ရှားမဟုတ်ပါ
အသုံးပြုခြင်း Fun, ကျင့်သုံး၏မျိုးစုံနည်းလမ်းတွေအားဖြင့်ကျွမ်းကျင်မှုသို့သင့်ဗဟုသုတလှည့်
ဂိမ်းများ, ဂီတ, ကဗျာ, ရုပ်ရှင်များ, လှုပ်ရှားမှုများ ea ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်တန်းများစဉ်အတွင်းဒါပေမယ့်လည်းကျောင်းဝင်းချွတ်နှင့်ဘွဲ့ရပြီးနောက်မသာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းလမ်း၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတက်အောင်
သင်ကြားရေးအရည်အသွေးကို secure အားလုံးကိုဆရာများကအသုံးပြုအဘိဓါန် Mandarin- နံနက်သင်ကြားမှုနည်းလမ်း
နည်းလမ်းမဩဝါဒပေးဆရာ, ဆရာမပေါ်တွင်မူတည်: ကွဲပြားခြားနားသောဆရာ, ဆရာမကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းကိုအသုံး
ကျောင်းသား 's တုံ့ပြန်ချက်များနှင့်ဆရာ, ဆရာမကြီးထွားလာအတွေ့အကြုံအပေါ် အခြေခံ. ကျွန်ုပ်တို့အစဉ်အစီအစဉ်-DO-check-ACT သံသရာကို အသုံးပြု. ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်တန်းများတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်
E-mail ကို: fiona@mandarinmorning.com